RASMI: Manchester United Oo Shaacisay Qorshaheeda Ciyaaraha Saaxiibtinimo Ee Xagaaga Iyo Safarradii Ay Ku Tegi Jireen Maraykanka | Laacibnet.net
RASMI: Manchester United Oo Shaacisay Qorshaheeda Ciyaaraha Saaxiibtinimo Ee Xagaaga Iyo Safarradii Ay Ku Tegi Jireen Maraykanka
Manchester United ayaa si rasmi ah u xaqiijisay in aanay sannadkan u bixi doonin ciyaarihii saaxiibtinimo ee ay ka hor xili-ciyaareedka ku tegi jirtay wadamo uu ka mid yahay Maraykanka, halkaas oo ay naadiyo kale kusoo wada ciyaari jireen.
United oo xili ciyaareedkii hore u baxday Australia iyo Bariga Fog ayaa waxa kale oo la filayay in sannadkan ay ku celiso dalalkaas oo ay ku darto India, haddii kalena ay waddanka Maraykanka u xadhko xidhato bisha July, hase yeeshee caabuqa Korona ee dunida kala-xidhxidhay ayaa waxa uu beddelay qorshe kasta oo naadigu ka lahaa safar ciyaareed oo ka baxsan Yurub.
Horyaalka Premier League ee dib u dhacay oo bilaha June iyo July soconaya ayaa waxa kale oo kasii dambayn doona Europa League oo August la filayo in la ciyaaro, waxaanay taasi keenaysaa in aanay wax waqti ah u helin dibedda.
Sannadkii ugu dambeeyey ee Manchester United aanay ka bixin qaaradda Yurub ee ay kulamada saaxiibtinimo ku qaadato ayaa waxa uu ahaa ixli ciyaareedkii 2002/03 oo waddamada Norway iyo Holland ay kusoo qaateen.
Madaxa qaybta maaliyadda ee Manchester United, Cliff Baty ayaa shaaciyey in sannadkan ay kansaleen safarradii ay ku tegi lahaayeen dibedda, maadaama tartamada Premier League iyo Europa League ay xilligaas ciyaari doonaan.
Baty waxa kale oo uu sheegay in xayiraadaha dhinaca socdaalka ee ka jira dunida ay qasbayso in qarshahoodii ay hore usii dejisteen ay dib u dhigaan.
Cliff Baty oo ka hadlayay shirka Maalgashadeyaasha Manchester United ee saddex biloodka ah ayaa waxa uu yidhi: “Kama qayb-qaadan doono tartamadii xagaaga ee sannadkan, sababtoo ah, waxa dib loo muddeeyey tartamada maxalliga ah iyo kuwa Yurub.”
Waxa kale oo uu Baty soo bandhigay khasaaraha soo gaadhay Manchester United muddadii uu jiray fayraska Korona, taas oo dhan 28 milyan oo Gini.